gaabinta : UBT
aasaasay : 1745
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Technology Braunschweig
Qorto Braunschweig University of Technology
Ku soo dhawow Universität Technische ku Braunschweig!
Qaybtani waxay ka kooban tahay ciidan ka mid ah macluumaad ku saabsan nafteena: Horumarinta taariikhiga ah ee Braunschweig tu ka, hadda ay taagan, iyo qorshaha istiraatijiyadeed ay mustaqbalka.
Xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa in aan u baahanahay in aad tixraac macluumaadka taas oo lagu heli karaa afka Jarmalka oo kaliya. Waan ka xunnahay wixii this aad keeni kartaa.
Tu Braunschweig bixisaa ardayda waxbarashada aad u fiican iyo tababar ku saabsan xirfadaha jilicsan - iyo fursado shaqo sidaas u fiican, gaar ahaan in industry, cilmiga iyo goobaha waxbarashada.
waxbaridda heer First iyo xaaladaha waxbarasho jiidasho yihiin qaybaha ugu muhiimsan ee ku image tu Braunschweig.
koorsooyin lagu hanuuniyey by cilmibaarista iyo siiyo ballaadhan, qoto-dheer asaaska, iyo sidoo kale bixiya fursadaha kala duwan ee takhasuuska shaqsi. Waxa kale oo aanu ku dhaqmaan aqoonta kala iibsiga iyada oo waxbarasho dheeraad ah cilmi-oriented.
Waxaan ku dadaaleynaa in si joogto ah loo horumariyo tayada cilmiga iyadoo ka qaybgalka ee ardayda, oo aan dhiiri-abuurnimo walbaba.
In sidaa la yeelo, waxaan shaqeeyaan koox ahaan iyo mashaariicda iskaashiga badan oo gudaha tu Braunschweig sidoo kale la jaamacadaha kale iyo hay'adaha cilmi-baarista (labada qaran iyo heer caalami), dugsiyada iyo shirkadaha.
Waxaan horumarinta koorsooyinka gaarka ah ee waxbarasho ee la kaashanaya saaxiibada our.
Waxaan dhiirrigelin iskaashiga goobaha dhexe iyo maamul baahsan in si joogto ah loo horumariyo tayada waxbarashada iyo cilmiga in aan bixino iyo si ay u fududeeyaan hababka waxbarasho. Waxaan bixinaa adeegyo iyo talooyin ardayda iyo cid kasta oo danaysa waxbarashada tu Braunschweig.
Carl Friedrich Gauss School – Kuliyada for Xisaabta, Sayniska kombiyuutarka, Maamulka Business, dhaqaalaha, iyo Social Sciences
Maamulka Ganacsiga iyo Dhaqaalaha
Architecture, Engineering Civil, iyo Sciences Environmental
Civil Engineering iyo Maamulka Ganacsiga
Engineering farsamo (Aeronautical, Automotive, warshadaha, Energy & Hab-)
Farsamo Engineering iyo Maamulka Ganacsiga
Engineering korontada, Technology Information, physics
Humanities iyo Sciences Waxbarashada
Ma rabtaa wada hadlaan University of Technology Braunschweig ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Braunschweig University of Technology ee Map
Photos: Braunschweig University of Technology rasmiga ah Facebook
Braunschweig University of Technology dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of Braunschweig University of Technology.